Raspberry Pi: ku dheeree nolosha SD-gaaga GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
SSD-yada ama saxannada adag sida lagu yaqaan, ma ahan tiknoolajiyad gebi ahaanba cusub tan iyo markii ay suuqa ku jirtay dhowr sano, si kastaba ha ahaatee marka loo barbar dhigo HDD-yada (disks-yada adag) weli waa cunug xafaayad ku jira. Si kastaba ha noqotee, Raspberry Pi Ma laha HDD ama SSD, laakiin waa SD, oo ahaa kaarka xusuusta ... sida pendrive, sida ku cad Wikipedia:
Secure Digital (SD) waa qaab kaar xusuus ah oo loogu talagay aaladaha la qaadan karo sida kaamirooyinka dhijitaalka ah, taleefannada gacanta, laptop-yada, iyo xitaa qalabka ciyaarta (desktop iyo kuwa la qaadan karo), iyo kuwo kale oo badan.
Haddii aad ku nooshahay Spain oo aad go'aansato inaad ka iibsato Raspberry Pi-gaaga halkaas Spain, sida haddii aad ku nooshahay waddan kale oo aad doorato eBay, Amazon ama dukaan kasta oo maxalli ah, Raspberry Pi-gaagu wuxuu la imaan doonaa SD, kaas oo leh faa'iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa. Ugu horreyntii, xaaladaha qaarkood waxay u shaqeyn doontaa si ka dhakhso badan HDD, laakiin waxay leedahay nolol waxtar leh oo gaaban, taas oo ah, way sii yaraan doontaa, markaa halkan waxaa ku yaal dhowr talooyin oo lagu kordhinayo nolosha SD ee Raspberry Pi-gaaga.
Dhibaatada ugu weyn ee haysata kaararka SD waa awooddooda qoraal ee xaddidan. Taasi waa, waxaan kaliya ku qori karnaa ugu badnaan jeer ama xog qeyb ama meel la siiyay, maahan inaan qori karno, tirtiri karno, dib u qori karno iyo wixii la mid ah waqti aan la cayimin, taas ma sameyn karno waligey, waqtiga ayaa imaan doona markii aysan awoodin sii wad qorista SD.
Sidaa darteed, halkan waxaa ku yaal tilmaamo lagu kordhinayo nolosha SD-ga 'Raspberry Pi':
Awood sare SD: Way fududahay, haddii aan haysanno 8GB SD waxaan haysannaa X bannaan oo aan ku qori karno macluumaadka, booskaas wuxuu leeyahay xaddi akhris iyo qoraal ah, laakiin haddii SD uu yahay (tusaale ahaan) 16GB markaa waxaan heli doonnaa boos dheeraad ah, oo u turjumaya maya waxay noqon doontaa lagama maarmaan in lagu qoro marar badan isla aagga, taas oo ah, waxaa jira meel badan oo ka mid ah SD-ga halkaas oo xogta la dhigo.
Ka soo iibso magac caan ah: Ma ahan wax qarsoodi ah, maadaama ay ku dhacdo SD waxay ku dhacdaa qaybaha kale ee qalabka. Tusaale ahaan, taleefannada casriga ah, waxaan iibsan karnaa mid Shiineys ah oo naga qaali noqon doona $ 30 oo sida muuqata marka la eego qeexitaanka qalabka wuxuu sameyn karaa ku dhowaad isla $ 300 Nexus, hase yeeshe, mustaqbalka fog nooca naadir ah (Shiinaha) ma sameeyo shaqo. Iyada oo SD ah waa isku mid, waxaa jira soo saarayaal badan laakiin waxaa loo aqoonsan yahay inay yihiin summad wanaagsan, tayo lehna ma badna. Had iyo jeer way fiicantahay in Google loo raadsado soosaarayaasha SD oo leh tayo wanaagsan, ka dibna fiiri haddii wax dukaan ah oo Raspberry Pi ah oo ku yaal Spain ama deegaankaaga ay ku jiraan SD-yadaas. Soo saar gabagabadaada ku saabsan qiimaha lacagta.
Deji Linux si aad wax badan ugu qorto RAM iyo wax ka yar SD: Si la mid ah barta 1, ka yar ayaa lagu qoraa SD, ayaa ka sii fiican. Waxaan ku guuleysan karnaa inaan waxbadan u qorno RAM-ka iyo in yar oo SD ah anagoo isticmaaleyna tmpfs
1 Isticmaalka tmpfs
Si aad ugu sheegto nidaamka inuu waxbadan u qoro RAM iyo in ka yar aaladda keydinta (kiiskan, SD) kaliya ku dar khad / iwm / fstab. Khadadkaas waxaan ku muujineynaa galka aan dooneyno in lagu dhejiyo RAM ee aan ku dhejin SD, tusaale ahaan:
By the way, haddii aad u baahan tahay wax ka badan 100mb qaybtaas, wax ka beddelo qiimaha khadka, adoo gelinaya cabbirka ugu sarreeya waxaan hubineynaa inuusan cunin dhammaan RAM-ka. Kadib dib u bilaw kumbuyuutarka waana intaas.
Sharaxaad, wax kasta oo lagu rakibay tmpfs (tusaale ahaan, / var / logs) waa la waayi doonaa marka kombiyuutarka dib loo bilaabo, taas oo ah, markay dib u bilaabaan ma lahaan doonaan diiwaanada, way madhan doonaan, iyo wixii la mid ah fayl kasta way fuulaan.
Tilmaamahan ayaa sifiican ugufiican adiga Raspberry Pi sidoo kale hadii ay leeyihiin PiPad. Ma aqaano qalabka kale ee faa iidada u lahaan lahaa maxaa yeelay, ma aqaano qalab kale oo aan ku shaqeyn karin HDD ama SSD iyo haa oo leh kaar SD ah, kaalay, kaamiro mooyee unless
Waxaan rajeynayaa inaad ku heshay xiiso, gaar ahaan ogaanshaha caarada sida tmpfs u shaqeyso
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Raspberry Pi: Ku dheeree nolosha SD-gaaga GNU / Linux
Ikhtiyaar kale oo lagu dheereynayo nolosha waxtarka leh ee SD, waa in loo gudbiyo nidaamka qaybinta SD illaa USB HD, oo loo isticmaalo SD oo kaliya sida boot ...
Ninyahow, uma maleynayo inay tahay xal wanaagsan in kor loogu qaado diiwaanada xusuusta, maaddaama RPi ay leedahay oo keliya 512 MB oo RAM ah ... Waxa Laegnur sheegayo ayaa leh caqli badan, u adeegso SD-ka sidii boot iyo disk adag oo dibadda ah / var iyo xitaa / guri.
Way fiicantahay in la ogeysiiyo in SD-yada oo dhami aysan la jaan qaadi karin Raspberry Pi, waxaan ka tagayaa xiriiriye halka uu ku faahfaahsan yahay SDs-ka ay yihiin iyo kuwa aan la jaan qaadi karin.
Maqaal aad u fiican, waxaan u maleynayaa in ikhtiyaar kasta uu leeyahay faa'iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa, inaad wadis adag ku dhex dhigto miiskaaga geedka ayaa ka saareysa la qaadi karo, wuxuu kordhiyaa cabirkiisa, iwm. Waxaan u maleynayaa waxa ugu fiican ee la sameeyo inay tahay in looga tago sida ay tahay, SD-da ayaa si kasta raqiis ah.
Tani waa faaladdaydii 1aad ee ku saabsan degelkan aan raaco. Waxaan haystaa RPI oo u shaqeynaya sidii serverka 24 × 7 oo leh amule iyo gudbinta ku xiran HD, habka loogula taliyo ee ku saabsan isticmaalka RPI sida serverka 24 × 7, waa in SD kaliya ay jirto / bootka xijaab iyo in wax kasta oo qaybaha kale ee haray ay ku jiraan gudaha HD, oo loo baahan yahay, in HD la isku xidho (sida uu yidhi Laegnur)
Illaa iyo hadda, wax dhibaato ah ma qabin ... Taasina way sii socotaa .... 😉
Waxaan dhawaan ku daray SSD iyo HD kumbuyuutarkeyga kumbuyuutarka waana tan aniga igu habboon.
SSD-kayga waxaan ku rakibay Wheezy in ext4 oo waxaan ku daray fstab
UUID = xxx / ext4 default, waqti, jimicsi, iska tuur 0 1
tmpfs / var / run cabirka tmpfs = 1024M, nr_inodes = 10k, qaab = 777 0 0
tmpfs / var / qufulka tmpfs cabirka = 1024M, nr_inodes = 10k, qaab = 777 0 0
oo waxaan la kulmay nasiibdarro in aan la kulmo koronto go'day isla maalintaas taasna waxay keentay, in xididku is-urursado "akhri oo keliya". Iyada oo kor loo qaado -o ah, rw ayaa lagu xallin lahaa laakiin uma maleynayo inay fikrad fiican tahay inaad ku dhex socotaan qayb qaybsatay.
Nidaam kale ayaan ka sameeyay fsck iyo sidoo kale jeegga laga soo qaaday gparted waxayna ku sii waday isla dhibaatada.
Waan ku hagaajiyay anigoo dib ugu rakibaya btrfs.
Waxaan weydiinayaa. Ammaan ma tahay in la sameeyo / var / log isbeddela? Ma jiraan wax muhiim ah oo halkaa ka jira oo nidaamku u baahan yahay inuu ka soo kabto xiritaanka xun?
Waxaan ku weydiinayaa maxaa yeelay waa wax aad loola yaabo waxa igu dhacay. Waxaan isticmaali jiray Linux ilaa 2011, waxaan la ildaran yahay koronto la'aan laakiin wax sidan oo kale ah igama dhicin aniga. Isla maalintaas aan ku rakibayo tmpfs / var / log iyo tusaha kale, taasi waa igu dhacdaa.
Ahem waqti hore kahor waxaan u qoray Buug Debian ARM si loo kordhiyo nolosha SD, marka loo yaqaan 'raspberry' waa isku mid waana la adeegsan karaa, tani aad ayey ugafiican tahay, ma tihid qof xun laakiin tafaasiil dheeri ah ayaa la waayey.
Jawaab Ainus Solheim
Maalin kasta waxaa jira cajalado badan oo SDD ah iyo qaabab isku dhafan oo loo yaqaan 'SDD + HDD' amarkan ayaa sidoo kale kordhin doona noloshooda waxtarka leh.
Iyo maaddaama RAM uu hadda yahay mid aad u jaban, ma dhaawici doonto in la galiyo goobo kala duwan oo ka caawin kara hagaajinta waxqabadka desktop sidoo kale.
PS: Waxaan jeclaan lahaa qof inuu wax ka qoro maqaallada ku saabsan daabacayaasha, gaar ahaan multi-laser b / w laser, Walaalku sifiican ayuu u qabtay ilaa maanta, laakiin tusaalihii ugu dambeeyay ee aan dalbaday waxay i siisay dhibaatooyin xaga shaashadda iskaanka ah - waan soo noqon doonaa - waana Waxay aadeen raadinta isbarbardhiga iyo fikradaha, waana la arkaa maqnaanshahooda, Isbaanish iyo Ingiriis labadaba.
Ma jiro "dhammaan ama aad ama phoronix" madbacadaha - haddii ay dhacdo in qof uu doonayo inuu sameeyo -, laakiin inta ka horeysa, haddii qof ka shaqeeyo iibinta noocyadan isweydaarsiga ah ee loo yaqaan 'B / W laser' si loogu isticmaalo xafiisyada yar yar ama si fudud loogu iibiyo khafiifka, uruuriyaan qanacsanaanta macaamiishooda moodooyinka noocan ah oo ay ku wadaagaan halkan ama halka ay ugu muuqato inay ku habboon tahay iyaga oo la wadaaga.
Waad ku mahadsan tahay macluumaadka. Aad u faa'iido badan. Guul!